मर्नु अघि पुग्नै पर्ने नेपालका यी ५ ठाउँ !! जाने हैन त यो दशैँमा !! - Experience Best News from Nepal
नेपाली प्राकृतिक गुणले सर्बसम्पन्न देशको, वाताबरण र घुमफिरको हिसाबले नेपाललाई निकै धनि मान्न सकिन्छ। समय र परिवेश अनुरुप नेपालका यी ठाउँहरु निकै प्रसिद्ध मानिन्छ र रमझम देखि पर्यटनको आकर्षणको रुपमा समेत यी ठाउँ निकै विशेष मानिन्छ।
लामो छुट्टि देखि छोटो छुट्टि आफ्नो समयकालिन यी ठाउँहरु तपाई घुम्न सक्नुहुन्छ।
१) माथिल्लो र तल्लो मुस्तांग्ङ
मुस्तांग्ङ आज हर युवा देखि हरेक पिडिको ब्यक्तिका मुखमा झुन्डिने नाम बनेको छ। विभिन्न चलचित्र देखि फोटोमा मनै लोभ्याउने भूगोल देखिने उक्त ठाउ हालको समय निकै उपयुक्त समेत मानिन्छ। मुस्तांग्ङमा निकै घुम्ने ठाउँ भएको हुदा केहि समय लिएर गुमेको नै निकै बेश हुन्छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज समेत रहेको चितवन अन्तरिक तथा वाय पर्यटकको निकै राम्रो थलो मान्न सकिन्छ। हजारौ संख्यामा पर्यटकको भिड यस क्षत्रमा हात्ती सवार देखि लिएर प्राकृतिक बन्यजन्तुको रुप हेर्न घुइचो लागेको देखिन्छ। सुर्य अस्तका निमित पनि यो ठाउँ निकै अब्बल मानिन्छ। नारायणीको किनार र सुर्य अस्त संगै फेब्रुअरी र अप्रिल महिना विशेष मानिन्छ।
भगवानको स्वरूप मानिने गौतम बुद्धको जन्म थलो लुम्बिनी विश्व सम्पदा सुचीमा रहेको छ, मानिस निर्मित विभिन्न चैत्य र गुम्बाले सजिएको लुम्बिनी क्षेत्र अन्तरिक र बिदेशी पर्यटकका निमित निकै अब्बल थलो मान्न सकिन्छ। निकै शान्त वाताबरण देखिने उक्त क्षेत्र निकै ठुलो साम्राज्य मान्न सकिन्छ।
जुन कुनै समय र परिवेशमा घुम्न सकिने साथै नेपालको सबै भन्दा प्रकृतिले दिएको उपहारको रुपमा लिन सकिने पोखरा नेपालको निमित घुमन्ते क्षेत्रका रुपमा लिन सकिन्छ। ठुलो मात्रामा पर्यटकको भिड रहने पोखरामा विभिन्न प्राकृतिक मनोरंजनको थलो लिन सकिन्छ। अनगिन्ति बनावोट रहेको उक्त ठाउँमा घुम्नका निमित ताल तलैया देखि झरना, खोला हिमाल रहेका छन् साथै प्याराग्लाइडीणका निमित पनि यो ठाउँ पर्ख्यत छ।
पहाडकी रानी नामले चिनिने यो ठाउँ चारै तिर पहाडले घेरिएको छ। निकै शान्त वाताबरण भएको यस क्षेत्र सुन्दर पहाड र हरियालीले भरिएको छ।
मनमोहक नुवाकोट र सात तले दरबार (फोटो फिचर)